Had iyo jeer way isbeddeleysaa - madal kastaa waxay ku socotaa isbeddel xoog leh hadda - sirdoonka macmalka ah, barashada mashiinka, ka shaqeynta luqadda dabiiciga ah, xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqda isku dhafan, xogta weyn, xannibaadaha, botska, Internetka Waxyaabaha… yeeh. In kasta oo taasi u muuqato mid argagax leh, maskaxda ku hay intaas oo dhan in waxtar u leh warshadeenna. Badbaadada macaamiisha iyo asturnaanta ayaa horumarin doonta, sidoo kale kanaalada iyo istiraatiijiyadda aan geyn karno si aan u gaarno marka ay raadinayaan alaabteena iyo adeegyadeena.
Qaadashada hore waa faa'iido - in kasta oo xoogaa khatar ah, kanaallada suuqgeynta dhijitaalka ah ee cusub waxay bixiyaan fursad aad u fiican oo lagu qabsado dhagaystayaasha aysan tartamayaashaadu u adeegin. Khatarta, dabcan, ayaa ah in qalabka warbaahinta laxiro markuu fashilmo ama la helo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad saameyn ku yeelan karto dhagaystayaashaada cusub oo aad dib ugu celin karto bartaada halkaasoo aad ku qabsan karto emayl ama aad ku gelin karto olole kobcin ah, markaa waxaad arki doontaa xoogaa guul ah.
Samee waxa shaqeeya - ha ka raaligelin inaadan awoodin inaad wada sameyso. Waa dhif iyo naadir in aad heshid ganacsi ka faa'iideysta dhammaan dhexdhexaadiyaasha iyo kanaalada. Runtii waa wax aan macquul aheyn in la helo meherad ka wada fahantay dhammaantoodna dhammaantood si wax ku ool ah u adeegsanaya. Hadaad natiijooyinka ku wadato emayl, isticmaal emaylka. Haddii aad ku wado natiijooyinka warbaahinta bulshada, isticmaal warbaahinta bulshada. Samee waxa shaqeynaya - ka dibna tijaabi oo ku dar waxyaabo kale oo dhexdhexaad ah sida aad otomaatig u tahay oo aad u dhisto waxtarka gudaha.
Dadku waxay i weydiiyaan sida aan ula socdo… Ma qabo. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u isticmaalo macluumaadka oo aan wax u baro, nalal cusub ayaa soo baxa maalin kasta. Waa mid ka mid ah sababaha aan si xor ah ugu dhiirrigeliyo hoggaamiyeyaasha kale ee warshadaha teknoolojiyadda suuqgeynta. Isku soo wada duub boggagayaga, waxaadna weli uun baran doontaa qayb yar oo ka mid ah waxa ka dhacaya warshadeenna.
Taasi waa su’aasha milyan-doollar ee aan la weydiinno beesheena. Halkee ayuu ka bilaabmaa? Waa hagaag, waa tan mid ka mid ah talo-bixinta adiga - Horudhaca Google.
Bilaw maanta! Haddii aad ku cusub tahay ganacsiga ama khibrad u leh suuq-geynta, dalabku wuxuu ku siinayaa talo iyo tilmaan fantastik ah.
Ma Weyn Doontaa Shaqo Suuqgeyntaada Robot?